Ukuqala ishishini / CBD
Usenokufuna ukuba bakuphembelele ngaphandle emarike CBD phambi kokuba kakhulu emva kwexesha, kodwa ulandele le miyalelo xa ufuna ukuqala nge yegadi hayi .placa.
Umsunguli of Joy Organics
7 January 2019 6 min ukufunda
Kulula ukubona izakhono kushishino CBD nenala. Ukwakha brand olomeleleyo emarikeni exineneyo yeyona nxalenye inzima. Xa kuqaliswa CBD yam brand siqu, Ndafunda lukhulu ngokwenza amaphutha. Nangona ezi ngcebiso akayi akuqinisekisi impumelelo yakho, siyathemba ukuba uya kukunceda siphephe imigibe eziqhelekileyo kwaye sambathe umendo a sungula fast nesebenzayo nawe.
ehlobene: Indlela ukuqala nokuthengisa inkampani yakho CBD
1. Yandisa ulwazi lwakho
Qonda ukuba ngokwenene CBD linyathelo ukuya ekuphuhliseni uhlobo ngempumelelo kuqala. kum, kwaqala ngothotho ukhangelo Google, ukufunda sonke sasikwazi malunga CBD: nenzuzo yayo, imbali, inkqubo ezahlukene gesi, yaye ngaphezulu. Ensuite, sadibana iingcali ezininzi kunye nezinye Iinkampani zecandelo. Kwadlula iinyanga ezimbini zophando phambi kokuba uyazi ngokwaneleyo malunga imveliso ukufumana umboneleli. Oku kwenza ukuba senze izigqibo ezisekelwe kulwazi njengoko wahamba kunye.
Sikhuthaza bonke matyendyana ukuba i-CBD shishini ukufunda incwadi yethu Ultimate CBD . Esi sikhokelo siqulethe iinkcukacha kwi-CBD, imbali, imveliso yawo kunye noncedo lwezo nempilo. Eli linyathelo elihle lokuqala ekwandiseni ulwazi lwakho.
2. Thatha phambili inyathelo
Ukuba ufuna ngokwenene ufuna ukuqala CBD lakho ishishini lakhe, kufuneka uqale. Sasidla ngokuthetha nabantu abaninzi abaye bakhetha, ukuchitha ixesha ukuya Uhlalutyo lwecandelo yaye uzama ukwenza yonke isigqibo esigqibeleleyo. ngokufanelekileyo, ukuba senze into.
Musa ukuvumela ukugqibelela wenze phambili. Kufuneka wazi (ukubona ngaphezulu), kodwa akukho mfuneko yokuba ukwazi ngokupheleleyo ukuba yonke into ukwazi. Fumana imveliso yakho emarikeni. Uza kufunda inkoliso into kufuneka ukwazi yaye.
3. Khetha ngobulumko igama lakho
Yintoni na zifonele inkampani yakho CBD iza kuba nefuthe elikhulu kwindlela yakho ukuya phambili. Eyona nyaniso ibuhlungu namhlanje kukuba iibhanki abafuni ukusebenza nomntu othengisa CBD. Si le nom de votre entreprise contient les mots “CBD”, “chanvre”, “cannabis” ou toute autre référence explicite à CBD, ibhanki mhlawumbi uya siphakamisa ukwenza ishishini lakho kwenye.
Khetha igama engabuzi iiflegi ebomvu kwaye kulula ukuphuhlisa. Ngubani owaziyo ukuba ishishini lakho izakujongeka kwiminyaka emihlanu okanye elishumi? Nous avons choisi “Joy Organics” parce que c’était simple, kulula ukukhumbula yaye kulula ukupela. Nangabo kwakhona lula kwezinye iimveliso, kuquka nalawo nto yakwenza CBD.
Incwadi yokugqibela: Ukuba ufumana igama ogqibeleleyo, kodwa ufumanise ukuba le website ayifumaneki, ukuze ube akukho luck. Ukuba website na umsebenzisi kodwa ayisetyenziswa, qhagamshelana umnini ukuze ubone ukuba ukulungele ukuthengisa. Kubalulekile ngeendleko igama elihle.
ehlobene: 6 imibuzo ngaphambi kokuba uqambe ntsango yakho yenkampani
4. Yenza LLC wakho
Cwangcisa phezulu LLC yakho ngokukhawuleza nje ukuba igama lakho. Le mfuneko kuba yinkqubo ebizayo futhi ibe yecela umngeni. Sasidla ukuqwalasela ezethu Sondeza Legal. Ibiyeyona ndlela ebiza bhetele yaye wathabatha ngaphantsi 20 imizuzu. isicelo sethu wathunyelwa ngoko nangoko yaye inani lethu yesazisi umqeshi malunga 10 iintsuku. Kwakungekho Ngokuqinisekileyo akukho mfuneko yokuba ahlawule imali emba ukuba eli nyathelo.
5. Yakhela logo yakho
Nge iinketho ezininzi ezikhoyo, Eli nyathelo kulula kwaye imali enkulu. kwiimarike online ezifana Fivver okanye 99 Designs singakhupha amakhulu ngeenkonzo abayili ezizimeleyo. Sangena nge 99 imizobo. Le Lenkonzo ikuvumela ukuba ukwazi ukucwangcisa ixabiso yakho, ngoko niya kufumana iisampuli abathungi emhlabeni. Wena ukunciphisa iziphumo ukuya ilogo ngcono evumelana nawe. Le inkqubo ke ithabatha malunga iintsuku ezintathu ukuya kwezintlanu kodwa kunokuba imali ngaphezu Fivver.
6. Yakhela website yakho
design Web site yenye inkalo apho iinkampani ezitsha obukhulu. Akukho mfuneko ukwenza iwebhusayithi entsha ukusuka ekuqaleni. Ngena ku Google kwaye phendla i imifanekiso. Sebenzisa simahla okanye angabizi ezifana WordPress, Squarespace Ou Wix. Fumana njengomyili ngubani Ungasebenzisa le template kwaye ufake kulo nomxholo kunye nemifanekiso.
Kubalulekile ukuba eli nyathelo: amashishini CBD asinakuqinisekiswa njengangoku ukusebenzisa Shopify ukuba inqwelo yabo lokuthenga. Sicebisa usebenzise WooCommerce kunokuba.
7. Khetha liqabane elifanelekileyo
Lo ngomnye weyona izigqibo ezibalulekileyo uya kwenza xa uqala ishishini lakho DBC. Nangezitena kunye nodaka yethu ivenkile, 50% kuzo zonke izithuthi zethu avela kubathengi abanyanisekileyo. umthombo yethu yesibini labafundi abathunyelwa yendlela. kungani? Ngenxa yokuba abantu abathanda iziphumo bafumane, ngoko ke babuyele ukuze.
Eyona ndlela ibhetele kukungakwazi ukunikela imveliso ukuba ayisebenzi. brand yakho kukhula njengoko abantu bayaqhubeka ukuba bathenge.
ehlobene: 5 iqhosha ukukhetha umthengisi CBD best
8. Fumana CBD iprosesa kuthathwa
Le nxalenye uxinzelelo yokuvulwa Uvuyo Organics yaba ngumbutho akhawunti yethu yomthengisi. In the US, kukho inani ngokumangalisayo elincinane yeebhanki ejongene kwezentengiso CBD. Le industry zibhabha ngokupheleleyo ngoku: Abantu baya kukuxelela into, ke ajike wenze enye. Kufuneka silumke ukuba igqibe ukusikwa off.
Kwaye nje ukusebenzisa Square okanye enye inkampani edumileyo unyango: abayi kuthengisa CBD. Kunokuba kwayo, kufuneka ufumane kumqhubekekisi eyenza processing ngokukhethekileyo CBD. ngaphezulu, kufuneka ufumane kumqhubekekisi esekelwe kwi-US.
Ukuba uzama iprosesa obusekelwe amazwe (UK, Mexico and Asia ziindawo ezithandwayo), uya kufumanisa ukuba malunga 30% kwaho uza kuyinikwa. Isiqingatha ezi abathengi ziya zifonele inkampani yekhadi lwabo, bathi akukho yinkohliso, kwaye akayi kubuyela ukugqiba uthenge lwabo. i 15% asele ukuthengisa ezilahlekileyo. ngaphezulu, umthengi ngamnye uya kufumana imirhumo yorhwebelwano aphesheya. Ayikho into kule meko wakha ubuhlobo obuhle.
9. Qala iimveliso ethandwayo
Ngoxa bemlinga ukudala ifomula yakho, musa kuwela kulo mgibe. nakho kwethu, ezi mveliso ngeke ethengisiweyo. Hlala kwiimveliso ezithengisa kakhulu.
kungoku nje, nongo uhlobo uthandwayo iimveliso CBD. Le lwesibini njengezingxobo. Ezi ndawo zimbini na indawo enkulu ukuqala. Khumbula ukuba injongo yakho ukuya ezivenkileni. Xa amiselwe, ungaqala ukuhlola iimveliso ngaphantsi esiqinisekisiweyo.